Papa သစ်တော် Saga က Facebook
Papa သစ်တော် Saga Facebook ကိုရှငျဘုရငျကနေဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, Candy Crush နှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး Saga ၏ developer များ.
ဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ fruity တံစို့တစ်အံ့ဩဘွယ်သော wacky ကမ္ဘာတဝှမ်း Papa သစ်တော်တုံကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်, acorn နှင့်အရူးငရုတ်သီး. သင်ကမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်အပေါငျးတို့သပုံးအလင်းဖွင့်ရန်လိုအပ်. သတိထားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှတဆင့်နှငျ့သငျ Papa သစ်တော်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်၏စွမ်းအင်ကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရည်မှန်း. ထက်ပိုပြီးအတွက်အကောင်းဆုံးရမှတ်ရန်သင့်မိတ်ဆွေများကို Beat 100 ပျော်စရာ, ကြမ်းကြုတ် fruity နှင့်အဆင့်ဆင့်စိန်ခေါ်.